Zimbabwe neMuvhuro yakacherechedza zuva reSADC Anti-Sanctions Day, vamwe vanhu vachiratidzira pamuzinda weAmerica muHarare, uyewo mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa vachiti zvirango izvi ngazvibviswe sezvo zviri kukanganisa hupfumi hwenyika.
Asi vakatemera zvirango izvi veAmerica, Britain neEuropean Union vanoti zvakatemerwa vashoma nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu.
SADC yakatanga kucherechedza zuva iri makore matatu adarika nechinangwa chekuti zvirango zviri kunzi neAmerica, EU nedzimwe nyika dzakabudirira hazvisi kuzobviswa kusvika muZimbabwe mave nehutongo hwejekerere zvibiswe.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vati Zimbabwe iri kuita nhauririano dzekugadzirisa hukama hwayo neEuropean Union uyewo vanoda kugadzirisa hukama hwavo neBritain neAmerica. Asi vatiwo havafari kuti zvirango izvi zvirikuramba zviripo zvisinei nekuchema kwavo.
Vati zvirango izvi zvirikuvhiringa hupfumi asi vakati kunyange hazvo zvichiramba zviripo, hurumende yavo yavo iri kuenderera mberi nekuita mabasa ebudiriro munyika. Hurumende inoti yarasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni makumi mana mumakore makumi maviri adarika nenyaya yezvirango.
Mutungamiri wesangano reBroad Alliance Against Sanctions iro rave nemakore matatu richiratidzira pamuzinda weAmerica muZimbabwe VaClavin Chitsunge, vatsinhira mashoko aVaMnangagwa.
Mutungamiriri wesangano reLabour and Economic African Democrats, Linda Masarira avo varatidzirawo nhasi vakurudzirawo kuti zvirango zvibiswe.
Vaimbove gurukota rinoona nezverunyararo nekurgererana muhurumende yemubatanidzwa, Amai Sekai Holland, vanoti kushomeka kwaita vanhu varatidzira nhasi kunoratidza kuti veruzhinji munyika havana ruzivo pamusoro pezvirango pamwe nekuti zvinoshanda sei.
Imwe nhengo yebazi revechidiki mubato reZanu PF muHarare, VaPeter Matange, vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha pahondo yeZimbabwe yekuzvisunungura kubva kuzvirango zveAmerica uye vanofara nerutsigiro rwavari kuwana.
Asi mumwe wevatevedzeri vemutauriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance, VaFelix Mafa, vaudza Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa vashoma uye SADC haifanire kupindira
Mashoko aya atsinhirwa nemutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaMarvelous Khumalo, vanoti
European Union yakatemerwa vatungamiri ava zvirango muna 2002. America ichizoita zvimwe chete muna 2003. Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsa mashoko padandemutande reTwitter kuti Zimbabwe yarasikirwa nemabhiriyoni akawanda emadhora kwemakore akawanda nekuda kwenyaya yehuori.
Muzinda uyu wakurudzira Zimbabwe kuti ive negwara rakajejka munyaya dzezvehupfumi uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kwete kuna kunyepera zvirango. Vachinyorawo padandemutande reTwitter veEuropean Union vatiwo nyaya yekuti zvirango zvakanganisa nyika kuda kubata vana veZimbabwe kumeso rikatiwo nyaya yehuori , kutadza kubata hupfumi zvakanaka uye kutyora kodzero dzevanhu ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iende kumawere.
Kukandirana makobvu nematete pakati pehurumende nenyika dzakabudirira kuri kuuya apo nhumwa yeUnited Nations Amai Amai Elena Dohan vasangana nemasangano akazvimirira oga vari muZimbabwe kuzoona kuti zvirango zvakanganisa here hupfumi kana kuti kwete. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kushanya kwavo hakuna zvakunobatsira sezvo veAmerica neEU varamba vakamira semusambagwena.